स्टेजमै छताछुल्ल ज्योतिको जवानी । दर्शंकले छुन खोजे संवेदनशील अंग । – Namaste Filmy
स्टेजमै छताछुल्ल ज्योतिको जवानी । दर्शंकले छुन खोजे संवेदनशील अंग ।
[dropcap]प[/dropcap]छिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा बिकृति र बिसंगति भित्रिएको कुरामा कुनै दुई मत छैन । लोक दोहोरीको भिडियोमा छोटा लुगा लगाउने, अश्लील सँकेत र अभिनय गर्ने देखि गीतको शब्द पनि उत्तेजक हुन थालेका छन । अब हुँदा हुँदा स्टेज कार्यक्रममा पनि यस्ता बिकृति र अश्लिलता मौलाउन थालेको छ । यसै साता जापानमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो कुरा प्रस्ट देखियो । बेलाबेलामा विवादित बनिरहने गायिका ज्योति मगरले जापानमा यस्तो अश्लीलता देखाइन कि हेर्ने दर्शकहरुले आँखा छोप्नुपर्यो ।
हुन त ज्योतिले प्रदर्शन गरिरहेको जवानी र हट प्रस्तुतिमा उत्तेजित हुनेहरु पनि कम थिएन । त्यसैले ज्योतिले झन उत्तेजित प्रस्तुति दिइन र दर्शकहरुलाई पग्लन बाध्य बनाइन । जसकारण कतिपय दर्शकले ज्योतिको संवेदनशील अंगहरुमा छुने प्रयास समेत गरिरहेको फोटो बाट पनि प्रस्ट हुन्छ । ज्योतिको प्रस्तुतिलाई कतिपयले चर्चामा आउनको लागी यस्तो गरेको बिश्लेषण गरे । त्यस्तै केहि दर्शकले भने उनको आलोचनासमेत गरे ।
आखिर कलाकार भएपछि यसरी जवानी देखाउनै पर्छ र ? नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने लोकदोहोरी क्षेत्र नै यस्तो फोहोरी भइरहेको छ । यसको बिरुद्धमा अवाज कसले उठाउँछ ? नेपाल लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानले यस्तो बिकृति र बिसंगतिलाई रोक्ने कुनै कदम चाल्नुपर्ने हैन र ?
फोटोहरु: शिरीष मगर, जपान ।
आमिरसँग रोमान्स गर्न आतुर ज्याकलिन ।
नेपालमा पहिलोपटक गुजराती फिल्म छयांकन गरिने ।